Fotoana fandefasana: 10-16-2020
Ny ampahany plastika dia vita amin'ny alàlan'ny famolavolana bobongolo miaraka amin'ny fomba fanodinana hafa, izay ny habe sy ny asany dia mifanaraka amin'ny takian'ny mpamorona. Maherin'ny 80% amin'ireo faritra plastika novolavolain'ny famolavolana tsindrona, izay no fomba lehibe ahazoana ampahany amin'ny plastika. Mampiditra ...Hamaky bebe kokoa »
Mba hahombiazana amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana vokatra plastika dia tsy maintsy fantatsika ny karazany sy ny fampiasana plastika. Ny plastika dia karazana fitambaran'ny molekiola avo (macrolecules) izay namboarina tamin'ny alàlan'ny fanamafisana polymerisation na fanehoan-kevitra polycondension miaraka amin'ny monomer ho akora. Betsaka ny mpihavana ...Hamaky bebe kokoa »